I-China Full Turnkey Assembly Manufacture and Factory |KAISHENG PCB
Ukwaleka ngesinyithi:I-HASL IKHOKHELA SIMAHLA
Izinto ezisisiseko:FR-4 tg135
I-Metal Coating: I-HASL IKHOKHELA SIMAHLA Indlela yeMveliso: SMT + Iileya: 2 Layer PCB
Izinto ezisisiseko: FR-4 tg135 Isiqinisekiso: SGS, ISO, RoHS MOQ: Akukho MOQ
Iindidi zeSolder: I-Lead-Free (Ithobela i-RoHS) One-Stop Services: I-PCB yevolumu ephantsi yokudityaniswa Uvavanyo: 100% AOI / E-test / Visual Test
Amagama angundoqo: Inkonzo yeNdibano yePCB, Inkqubo yeNdibano yePCB, Abemi bePCB, abavelisi beNdibano yePCB, iSitshixo sokuJika
Kutheni ukhetha inkonzo yethu yendibano yePCB?
1. Ngokuyinxenye i-Turn-Key, ungaodola ii-PCBs kunye neenxalenye.IiNjineli zethu zineminyaka engamashumi eminyaka yamava okwenziwa kwe-PCB ukuqinisekisa ukubekwa kweendawo ezihlangabezana neemfuno zesekethe kunye nezomatshini wokwakha.
2. I-PCBFuture inokubonelela ngee-PCBs ezikumgangatho ophezulu ezingenanto kunye neendibano zebhodi yesekethe eprintiweyo ngamaxabiso akhuphisanayo kakhulu kunye nenkonzo ebalaseleyo kunye nokuhanjiswa kwangexesha.
3. Ngezibonelelo zethu kunye namava, sinayo into efunekayo ukuhlangabezana neemfuno zeprojekthi yakho ukusuka kwingcamango ukuya kwimveliso kwaye ube neqabane lakho lobunjineli be-elektroniki epheleleyo kungakhathaliseki ukuba iprojekthi yakho inkulu okanye incinci kangakanani.
Prototype PCB indibano
IiNkonzo zeNdibano yeBhodi yeSekethe ye-Turn-Key
Ukuhlolwa komgangatho kunye nendibano yokugqibela
Uqinisekisa njani ukuba izinto ze-elektroniki zezemvelo
1. Akufunekanga uthenge izinto ezisetyenzisiweyo kunye nezomgunyathi ngexabiso eliphantsi.Kuya kufuneka uthenge kumzimveliso wokuqala ochongiweyo kunye nezinye iitshaneli ezisesikweni, ezinje ngeDejie, iMouser, iArrow, njl.;
2. Izinto ezithengiweyo mazifaniswa ne-BOM yokuvelisa ukuqinisekisa ukuba uphawu kunye nomzekelo zichanekile;
3. Ngaphandle kokuba umthengi uneemfuno ezicacileyo, izinto ezithengiweyo ziveliswa kakuhle ngabavelisi abasemthethweni, kwaye umgangatho uqinisekisiwe;
4. Izinto ezithengiweyo mazitshekishwe ukuqinisekisa ukuba zisebenza kakuhle;
5. Izinto ezithengiweyo kufuneka zigcinwe ngokufanelekileyo ukuphepha iingxaki ezisemgangathweni ezifana nokufuma ngenxa yokugcinwa okungafanelekanga kwezinto.
Unokukhetha njani umenzi wendibano yePCB?
1. Iqondo lobungcali kwifektri.
2. Ukwazisa ngenkonzo.
3. Amava oshishino.
4. Ixabiso le-PCBA processing libonakala elubala.
Siluncedo, simamele kwaye siyakuxhasa ngendlela esebenzayo yokukunceda ukuba uphumelele kukhuphiswano lweemarike.Ngokuphathelele amaxabiso ethu, uya kuwafumana afikelelekayo kakhulu.Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye unemibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelanasales@pcbfuture.com, siya kukuphendula ngokukhawuleza.
Ngaphambili: I-FPGA yeNdibano yeBhodi yeSekethe ePhezulu
Indibano yePcb Turnkey